कहाँ जान्छन् हराएका महिला तथा बालबालिका ? « प्रशासन
कहाँ जान्छन् हराएका महिला तथा बालबालिका ?
• लोकेश धामी
कैलाली । कैलाली जिल्लामा वर्षेनी महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढदै गएको भएपनि भेटिने सख्या भने न्युनमात्रै रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म मात्रै ९२ महिला र ५० बालबालिका हराएका उजुरी परेका छन् ।
हराएका ९२ महिलामध्ये जम्मा २९ जनामात्रै फेला परेका छन् भने ५५ महिलाको बारेमा प्रहरीलाई अझै कुनै अत्तोपत्तो छैन । हराएका महिला नभेटिने गरेको यो पछिलो पटक भने होइन । प्रहरी र महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्ने संघसस्थाको तथ्याङक हेर्ने हो भने वर्षेनी हराएका थुप्रै महिला तथा बालबालिका भेटिएका छैनन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालको तथ्याङक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि १ सय २१ महिला हराएकामा १ सय ७ महिलामात्रै फेला परेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा कैलालीमा ५० बालबालिका हराएको प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेश रावलले बताउनुभयो । ५० बालबालिका हराएकोमा हालसम्म २९ बालबालिकालाई मात्रै भेटाएर आफन्तको जिम्मा लगाएको र २१ बालबालिकाको खोजीकार्य भईरहेको प्रहरी सहायक निरीक्षक रावलले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमापनि ९५ बालबालिका हराएकोमा७७ फेला परिसकेका छन भने १८ बालबालिका अझै बेपत्ता छन । तिनको अत्तोपत्तो नहँुदा परिवारमा पीडा छ । । महिला हरानुको मुख्य कारण घरायसी विवाद रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हराएका महिलाको अनुसन्धानपछि अधिकांश महिला घरायसी विवाद, प्रेम विवाह, रोजगारीको लोभ लालचमा हराउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै अधिकाश बालबालिका विभिन्न प्रलोभनमा परेर हराउने गरेको प्रहरीको भनाई छ । विशेषतः समाजमा व्याप्त रहेको छोराछोरीको विभेद र भेटिएको जानकारी नआउनुले मुख्य समस्या बनेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । महिला र बालबालिकामा चेनताको वृद्धि हुननसकेका कारण यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिएको बताईएको छ ।